The New ABC ee Tafaariiqda: Had iyo jeer Noqo Isku Xidhka | Martech Zone
The New ABC ee Tafaariiqda: Had iyo jeer Noqo Iskuxirka
Goobaha tafaariiqda lebenka iyo madaafiicdu wali waxay wadaan awood badan oo wax iibsi oo ay ku kaydsan karaan bakhaarradooda - mana dhici doonto waqti dhow. Laakiin dabeecadaha ayaa isbeddelaya, oo u baahan istiraatiijiyadda iibka gudaha ee dukaamada dhexdooda si ay u dhisaan xiriiro iyo waayo-aragnimo fiican macaamiishooda si loo hubiyo inay ku soo noqdaan.
Xogtan macluumaadka ah ee ka socota DirectBuy waa muuqaal hufan oo ku saabsan caqabadaha iyaga u gaarka ah, sida dabeecadda macaamiisha ay isu beddeleyso, iyo xeeladaha cusub ee ay geynayaan. Waxaa laga yaabaa in midka aan ugu jeclahay ay tahay ABC-da cusub… maahan Had iyo jeer Xidho, waa Had iyo Jeer Isku Xidh!
Xeeladaha iibka adag ee aasaasiga ahi waxay ku dhacayaan dariiqa iyagoo doorbidaya adeegsi badan oo saaxiibtinimo leh, isdhexgal adeeg leh. Waxaan maalgelin ku sameyneynaa noocyada faa'iidooyinka dalwaddii ah si xubnuhu u helaan qiimaha iyo adeegyada ugu fiican iyagoo aan waligood guriga ka bixin. DirectBuy
Dukaameysiga qadka tooska ah kama bixinayo uun sahlanaan, waxay bixisaa tan oo faa'iidooyin kale ah:
Saacadaha Kaydi - Macaamiisha ayaa wax ka adeegan kara markasta oo ay internetka ka rabaan.
Kharashka tartanka - Tartanka guud ahaan internetka ayaa hoos u dhigaya qiimaha u dhexeeya tartamayaasha.
Speed - Sugitaan la'aan safafka shopping dukaamaysiga khadka tooska ah ayaa aad uga dhakhso badan.
Bixinta - Helitaanka, kala duwanaanta iyo isbarbardhiggu dhammaantood waa ka sarreeya khadka tooska ah.
Dadku wali way ka dukaameystaan ​​dukaanka sababo badan awgood… si ay u arkaan oo u taabtaan badeecada, raaxada dukaanka, qadarinta shaqaalaha, iyo xaqiiqda ah inay alaabada si fudud ugu soo celin karaan. Isku habboonaanta khadka tooska ah ee internetka oo leh waayo-aragnimo weyn oo ku dhex jirta dukaanka ayaa hagaajineysa awoodda tafaariiqleyda si ay u helaan taraafig badan oo dukaan ah iyaga oo wadista beddelaadda khadka tooska ah sidoo kale.
Si fudud uma dhigmi kartid khibrada macaamiisha wadahadal ama wicitaan taleefan oo leh fursad shaqsiyeed. Dhisida xiriirada waa inay ahaadaan kuwa mudnaanta u leh leben kasta iyo hoobiye.
Tags: markasta xiriiridirectbuyjiilka leddukaamaysiga mobiladadukaanka internetkatafaariiqdakhibradda wax iibsigakhibradda dukaanka
Astaamaha Hay'adda iyo Dabeecadaha ay CMOs Doonayaan
Waxqabadyada Suuqgeynta ee ugu Sarreeya ee Ganacsiyada Yaryar iyo Kuwa Dhexdhexaadka ah
Jul 12, 2016 markay tahay 10:57 PM
Waad ku mahadsantahay macluumaadka. Ficilkeyga aan ku xusay, jawaab celintaas togan ama bogga wacan ee facebook, waxay dadka ku riixi kartaa inay iibsadaan smth. Laakiin fikradda ugu xun ayaa ah in fiiro gaar ah loo yeesho SMM sidoo kale ecommerce ma daneyso SEO.